Askar tababar xirfad kororsi looga furay xerada Jaziira ee Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Askar gaareysa 211 oo ka tirsan ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ee maanta tababar xirfad kororsi looga furay xerada Jasiira ayaa waxaa ka qeyb galay saraakiil ka socotay hogaanka Tababarada Ururka Midowga Yurub, Saraakiil ka socotay Amisom, Taliyaha Ciidanka badda iyo difaaca xeebaha, Abaanduulaha ciidanka Xoogga dalka, Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed, iyo marti sharf kale.
Munaasabadda ayaa waxaa hadal kooban ka jeediyay ku xigeenka hogaanka qeybta tababarada Midowga Yurub oo sheegay in ay u taagan yihiin tayeenta ciidamada, waxaana uu sheegay in loo baahanyahay in laga qeyb qaato tayeenta iyo horumarada ciidanka, isagoo xusay in uu kormeeri doono sida tababarka ay u qaadanayaan ciidamada,.
Abaanduulaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cabdirisaaq Khaliif Cilmi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in tababarada nuucaan oo kale ah ay ka socdaan deegaano ka mid ah dalka, waxaana uu sheegay in muhiim uu u yahay tababarka loo qabanayo ciidamada taa oo sahleysa in xirfadooda ay kordhaan.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe oo gaba gabadii munaasabaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta muhiimada ay u leedahay askariga Akhlaaqda iyo ilaalinta xuquuqda Aadanaha, waxaana uu kula dar daarmay in ay la socdaan casharada tababarkani ay ku qaadanayaan.
Xerada Jaziira ayaa waxaa horay loogu tababaray ciidamo badan oo hadda la sahqeeya dowladda Soomaaliya, waxaana xeradan haatan ciidamada ku tababara macallimiin ka socda Midowga Yurub iyo Midowga Afrika.